प्रदूषण उस्तै: कडा रोग निम्ताउन सक्ने विज्ञको चेतावनी - Dainik Online Dainik Online
प्रदूषण उस्तै: कडा रोग निम्ताउन सक्ने विज्ञको चेतावनी
प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७७, सोमबार ७ : ५८
काठमाडौं । केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा देखिएको वातावरण प्रदूषणको उग्र रूपले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ ।
प्रदूषणको समयमा मनपर्दी हिँडडुल गर्दा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या पर्न सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
उनीहरूले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै सचेत र सजग रहन सर्वसाधरणलाई आग्रह गरेका छन् । केही दिनयता धुलोधुवाँका कण वातावरणमा अत्यधिक बढेपछि प्रदूषण दर उच्च भएको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
यसैगरी, नाकको प्वालदेखि तलसम्म र फोक्सोका श्वासनलीमा एलर्जी गराएर रुघाखोकी लाग्ने, छाती घ्यारघ्यार हुने, सास फेर्नसमेत समस्या देखिने र आँखा पोल्ने, छाला चिलाउने जस्ता गम्भीर समस्या देखापर्न सक्ने डा. बलमे बताए ।
डा. बमले ग्याँस पदार्थ १० पीपीएमभन्दा साना आर्सनिक, सिल्कालगायत बालुवाका कणहरू सबैमाथि जाने र २.५ पीपीएमभन्दा साना ग्याँसका कार्वनमोनोक्साइड, कार्बन, साइनाइट, सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोअक्साइड कण फोक्सोबाट रगतका नसासम्म नै पुग्ने बताए ।
‘जसका कारण धमनीलाई साघुँरो गराइदिएर रक्तचाप बढ्न सक्छ । वातावरण प्रदूषणले हृदयघात र पक्षघात १४ गुणा बढाउने जोखिम बढ्न सक्छ । यस्तै, प्रदूषणका कारण दीर्घकालीन फोक्सोका क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । फोक्सो तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डेले वातावरण प्रदूषणका कारण रोगको जोखिम बढी हुने बताइन् ।
प्रदूषणका कारण व्यक्तिको आयु पनि घट्ने भन्दै प्रदूषण बढ्दै गए दीर्घरोग (दम, मुटु) को समस्या पनि देखिने उनले जनाइन् । हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा २५ गुणा माथिसम्म प्रदूषण बढेको पाइएको छ । वातावरणमा वाष्पीकरण एकदमै घटेको छ ।
यसैबीच, वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएपछि चिकित्सकले सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए ।
चिकित्सकले कोठाको वातावरण सफा राख्नुपर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला सहरमा मुख्य रूपमा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँका कारण प्रदूषण बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।